| LINE အခမဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတောင်းဆို APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူမှု Apps ကပ » LINE အခမဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတောင်းဆို
LINE အခမဲ့ APK ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများတောင်းဆို
LINE ပိုမိုနီးကပ်စွာသင့်မိသားစု, သူငယ်ချင်းနှင့်ချစ်ရသူ-အခမဲ့ရန်သင့်အားဆောင်ခဲ့ဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းဆက်သွယ်ရေး reshapes ။ အသံနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု, မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စတစ်ကာများတစ်အဆမဲ့အမျိုးမျိုးနှင့်အတူသင်တတ်နိုင်သမျှထင်ဘယ်တော့မှမဖွင့်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသန်း 600 ကျော်အသုံးပြုသူများသည်နှင့်အတူ, LINE အဆက်မပြတ်ပလက်ဖောင်းချဲ့ထွင်မယ့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအသစ်များကိုအတွေ့အကြုံများနှင့်အဆင်ပြေများကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
▷ LINE ရဲ့နယူးအင်္ဂါရပ်များ
- Make Group မှ 200 ပြည်သူ့အတူတောင်းဆို
- Keep သည်နှင့်အတူပိတ်သင့်သောအရာကိုသိမ်းဆည်းထားပါ
Keep ထဲမှာမက်ဆေ့ခ်ျများ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူအလွယ်တကူသူတို့ကိုမျှဝေပါ။
▷ LINE ရဲ့ပင်မအင်္ဂါရပ်များ
- အခမဲ့အသံနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု: အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာနှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူထိတွေ့စောင့်ရှောက်ရန်သင်၏ PC သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းကိုသုံးပါ, သို့မဟုတ် go အပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအစည်းအဝေးကျင်းပရန်!
- ဘယ်နေရာမှာမဆိုလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး: စကားပြောမယ့်တစ်ဦးကိုထိပုတ်ပါကွာသည်။ စတစ်ကာများ၏ LINE ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူကတက် Spice သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကိုပေးပို့, ဗွီဒီယိုများနှင့်ပင် GPS စနစ်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုသင်မှတက်နေသောအရာကိုသိစေရန်ကိုသြဒိနိတ်။
- တစ်ဦးက Full-featured လူမှုကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှု: သင်၏မိတ်ဆွေများကို '' ရေးသားချက်များပေါ်တွင်သင်၏ Timeline ကိုသို့မဟုတ် comment ကိုရန်သင့်တစ်နေ့တာ-to-နေ့ကလှုပ်ရှားမှုများတင်ရန်။
သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ဝေမျှမယ်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များသို့မဟုတ်သင့်အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းများနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွားအကြောင်းပြောဆို: - Group မှချက်တင်ထိုင်။
- ထိုစတစ်ကာဆိုင်အသစ်အသုံးအနှုန်းတွေကိုရှာပါ: စတစ်ကာများ၏ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစုဆောင်းခြင်းသင်ကိုယ်တိုင်သင်သည်ချင်ရုံလမ်းဖော်ပြစေကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှနာမည်ကျော်နှင့်ထူးခြားသောဇာတ်ကောင်ပါရှိပါတယ်။
- LINE အရာရှိတဦးကအကောင့်နှင့်အတူအကြောင်းကြားနေသူတို့၏အရာရှိတဦးကအကောင့် friending ဖြင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးနာမည်ကြီးတွေနှင့်ကုမ္ပဏီများနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ။
- အသစ်က App များချိတ်ဆက်ရယူပါ: LINE ဧည့်ခံသငျသညျစောငျ့ရှောကျနှင့်သင့်အသက်တာကိုအသစ်အဆင်ပြေဆောင်ခဲ့ဦးမည်ကြောင်းဖျော်ဖြေရေးနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ app တွေတစ်ခုတံခါးပေါက်ပေးပါသည်။
- LINE ထဲကအတူနိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှု Make: ယှဉ်ပြိုင်အနိမ့်မှုနှုန်းမှာမိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်ကုန်းမြေနယ်နိမိတ်နိုင်ငံတကာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ပါ။ သင်ပင် (သာအချို့သောနိုင်ငံများရှိရရှိနိုင်ပါ) LINE အသုံးပြုသူများသည်မဟုတ်သောမိတ်ဆွေများကိုမခေါ်နိုင်ပါ။
အကြှနျုပျတို့သညျကို Android OS ဗားရှင်းအထက်တွင် 4.0.3 နှင့်အတူ LINE ကိုအသုံးပြုဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
•တစ်ဦးကမကြာသေးမီက updated profile များကိုအပိုင်းသူငယ်ချင်းများ tab ကိုထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
•နယူး effect နှင့် filter ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုမှထည့်ပြီးပါပြီ။ (အချို့ကိရိယာများပေါ်တွင်မရရှိနိုင်သေးပါ)
• Group မှဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုယခုအပြည့်အဝရှုခင်း mode မှာထောက်ခံနေကြသည်။
•ကျွန်ုပ်တို့သည် Timeline ကိုအချို့တိုးမြှင့်မှုများကိုဖန်ဆင်းပါတယ်။
- The post ဖြစ်စဉ်ကိုပိုပြီးထိုးထွင်းသိမြင်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
- Post ကို, မှတ်ချက်များ likes နှင့်ရှယ်ယာယခုပိုပြီးမြင်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။
•သင်သည်ယခု၎င်းတို့၏မူလ resolution ကိုအတွက် Keep ထဲမှာပုံရိပ်တွေကိုသိမ်းဆည်းရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
LINE: အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု & မက်ဆေ့ခ်ျများ
64.63 ကို MB
လိုင်းကင်မရာ App ကိုသင်ခန်းစာ
Ahmed က says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 18, 2018 မှာ 6: 36 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 29, 2017 မှာ 3: 56 ညနေ
တစ်ခုနောက်ဆုံးမြင်ကြ frnds သိရန် option ကိုနှင့်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ် ofline Add
ဇွန်လ 17, 2017 မှာ 6: 18 နံနက်
ငါသည်ဤ website ကိုကြိုက်တယ်
မတ်လ 18, 2017 မှာ 11: 03 နံနက်
tarun netam says:
ဇူလိုင်လ 10, 2016 မှာ 9: 25 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 25, 2016 မှာ 3: 28 ညနေ
သြဂုတ်လ 24, 2015 မှာ 8: 29 နံနက်
ဒီ app verry ကောင်းသော yaa bahut acch hai
ဇွန်လ 21, 2015 မှာ 10: 39 နံနက်
acha hai acha ပျော့ buhath
မေလ 25, 2015 မှာ 3: 10 ညနေ
သူမက်ဆေ့ခ်ျများအတွက်အကောင်းဆုံး App ဖြစ်ပါတယ်နှင့် Thnx ဦး၏အားလုံးတောင်းဆို
မေလ 25, 2015 မှာ 3: 08 ညနေ
သူမက်ဆေ့ခ်ျများအတွက်အကောင်းဆုံး App ဖြစ်ပါတယ်နှင့်တောင်းဆို
မေလ 12, 2015 မှာ 6: 51 နံနက်
မေလ 8, 2015 မှာ 10: 28 ညနေ
ဧပြီလ 30, 2015 မှာ 9: 54 နံနက်
ဧပြီလ 28, 2015 မှာ 10: 28 နံနက်
Mayank Saxena က says:
ဧပြီလ 14, 2015 မှာ 2: 16 ညနေ
really..nice app ကို ... ။ !!! 🙂🙂
realy..nice app ကို ... ။ !!! 🙂🙂
ဧပြီလ 9, 2015 မှာ 11: 04 နံနက်
ငါသည်ဤ website အတွက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောပါကဘာလဲဆိုတာ ... ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ။
မတ်လ 2, 2015 မှာ 12: 16 ညနေ
ကိုယ်ကဒီကအရမ်း useful.voice နှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကို app.its ကြိုက်တယ်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2014 မှာ 7: 43 ညနေ
Ali မှီခိုရာ says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 1, 2014 မှာ 7: 05 ညနေ
plz ဆရာ, ငါ့ကိုကူညီ LINE အခမဲ့ (youwave), ငါ၏အ leptop အပေါ်လုပ်ဆောင်နေသည်မဟုတ်မက်ဆေ့ခ်ျတောင်းဆို
ဇန်နဝါရီလ 24, 2015 မှာ 4: 43 ညနေ
BlueStacks သင်အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုသုံးနိုင်သည်ထို့နောက် youwave ၏ insted ကိုသုံးပါ
နိုဝင်ဘာလ 30, 2014 မှာ 12: 42 ညနေ
ဘာ app ကို
ဟာမစ် Mahmoodi says:
နိုဝင်ဘာလ 12, 2014 မှာ 12: 47 နံနက်
Hi.Recently ငါသည်ငါ့မိုဘိုင်းကိရိယာမှအပလီကေးဖယ်ရှားပေမယ့်အခုကို set up ကိုမရ။ ငါ့ကိုသင်၏အထောကျအကူပွုလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အအရိပ်အမြွက်ပေးပို့ပါ။
အောက်တိုဘာလ 26, 2014 မှာ 1: 13 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 26, 2014 မှာ 1: 08 ညနေ
ငါသည်ဤ webside ကြိုက်တယ်
အောက်တိုဘာလ 19, 2014 မှာ 6: 54 နံနက်
အောက်တိုဘာလ 12, 2014 မှာ 6: 17 ညနေ
ur coments im gona dis app ကို install ဖတ်ရှုပြီးနောက် ... နေမကောင်းငါ၏အတှေ့အကွုံမြားရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းနောက်ပိုင်းမှာဦးပြောပြ